Ny metalization dia tsy mitovy amin'ny firafitry ny rafitry ny sarimihetsika foil. Ampianaro anao ny fomba hisafidy eto. Ho an'ny kapasitera sarimihetsika manify metaly, ny alimo dia alefa ao amin'ny sarimihetsika dielectric amin'ny alàlan'ny fametrahana banga sarimihetsika. Ny metallization dia kely kokoa noho ny capacitor vita amin'ny foil misaraka sy ny fonon'ny membrane, ny lanjany dia maivana kokoa, ary ny vidin'ny vondrona Fala dia ambany, ary manasitrana izany. Saingy mahatonga ny fahafaha-manao ambany kokoa koa izany. Ny habe kely kokoa sy ny vidiny ambany dia manintona indrindra amin'ny fahafahan'ny herinaratra avo lenta
Ny fanasitranan-tena dia manondro ny fihoaram-pefy anatiny na ny lesoka ao amin'ny membrane avy amin'ny overvoltage mandalo izay esorina ao anatin'ny microfarad vitsivitsy. Ity dia lesoka kely amin'ny voltase ivelany, fa ny capacitor dia tsy manana fahasimbana maharitra mba hisorohana ny fihenan'ny capacitance azo tsinontsinoavina. Ity tombony ity dia mahatonga ny capacitor sarimihetsika metaly HVC ho safidy avo lenta amin'ny fampiharana, fa ireto tranga efatra manaraka ireto:
1) capacitance kely latsaky ny 0.01 μF, izay tsy zava-dehibe ny haben'ny fahasamihafana, ary ny foil sarimihetsika fitaovana dia kely kokoa.
ny komandy mitohy avo lenta ao amin'ny faritra mivadibadika , 3) Toy ny komandy mihelina avo ao amin'ny tadivavarana tampoka,
4) Ny tabataba ambany dia misy olana amin'ity fanadiovana tena ity, na dia kely aza no miaraka amin'ny tabataba malefaka.
Polyester dielectric: toy ny metallization matetika ny fifantenana ny HVC rafitra, ary ny polyester dia matetika ny fifantenana ny dielectric fitaovana sarimihetsika. Ao amin'ny dielectrics HVC telo, ny polyester dia manana ny dielectric avo indrindra, manome ny vidiny ambany indrindra amin'ny haben'ny capacitor, ary ny tombony amin'ny fiasana amin'ny hafanana hatramin'ny 125 ° C amin'ny antsasa-manila malefaka. Na izany aza, satria manakana ny safidiny ho toy ny voltora AC avo lenta na avo lenta ny fiparitahan'ny herinaratra, dia manakana ny fampiharana azy amin'ny voltase AC avo lenta na avo lenta ny fatiantoka; avy amin'ny -55 ° C hatramin'ny 0 ° ho capacitance C ary avy amin'ny 50 ° C hatramin'ny 125 ° C, polyester dia tsy capacitance mazava tsara amin'ny hafanana tafahoatra. Na izany aza, marihina fa ny capacitance avy amin'ny 0 ° C hatramin'ny 50 ° C dia niova ho ± 1% ihany.
Ny dielectric polypropylène dia mifototra amin'ny zorony fatiantoka ambany kokoa fa ny kapasitor HVC dia azo ekena ho an'ny DC avo lenta, AC avo lenta ary fifandraisana matetika. Mandritra izany fotoana izany, ny resistors insulating avo sy ny dielectric absorption ambany dia mahafeno ny capacitor DC marina. Amin'ny fampiharana maro dia hanolo ny polyester izy, afa-tsy ny tsy miovaova dielectric ambany; satria manify avo tahan'ny foil sarimihetsika tsy azo, ny habeny dia lehibe sy ambony. Zava-dratsy izany fa ny mari-pana ambony indrindra dia 105 ° C. Ny polypropylene dia mety amin'ny fampiharana izay tsy ampy polyester maro. Na dia ny polyester aza dia azo ampiasaina amin'ny mari-pana midadasika: ny kapasitorany dia mitovy amin'ny tahan'ny fiakaran'ny mari-pana. Noho izany, ny polypropylene capacitor parallèle polyester capacitance mamorona mari-pana fanonerana capacitor.
Polyphenylene sulfide dia ampiasaina amin'ny capacitance marina sy ny mari-pana amin'ny sakany. Izy io dia afaka miasa amin'ny -55 ° C hatramin'ny 125 ° C, indrindra ny fahafahan'ny latsaky ny 1%, afa-tsy ny sanda faran'izay ambony. Polyphenylene sulfide no dielectric capacitor tsara indrindra ary sarimihetsika dielectric an'ny capacitor chip FCP.
tabilao fampitahana dielectric: